Amai Pillay Vanoita Hurukuro naVaTsvangirai
Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations – Human Rights Commission, Amai Navi Pillay, avo vari kuongorora nyaya dzekodzero dzevanhu munyika vasangana nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira. Amai Pillay vakurudzira kuti komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu igadziriswe nechimbichimbi sarudzo dzisati dzaitwa.
Vachitaura nevatori venhau manheru ano mushure mekupedza musangano wavaita naVaTsvangirai, Amai Pillay vakurudzira kuti komisheni yekodzero dzevanhu inge yava kushanda nemazvo sarudzo dzisati dzaitwa.
Amai Pillay vati vazeyawo nyaya yemhirizhonga ine chekuita nesarudzo dzemuna 2008.
VaTsvangirai vatiwo hurumende yemubatanidzwa iri kushanda zvakaomarara kuti igadzirise zvese zviri kunetsa munyika panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvikurusei munguva inoitwa sarudzo munyika.
VaTsvangirai vati vari kunetsekana zvikuru nenyaya yemhirizhonga iri kuramba ichiitika munyika.
Vasati vasangana naVaTsvangirai, Amai Pillay vasanganawo nevemasangano anoshanda akazvimirira ayo anga akakokwa nehurumende kuti apinde mumsangano naAmai Pillay padare reparamende.
Mushure memusangano uyu, Amai Pillay vasanganawo nemamwe masangano akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights ne Zimbabwe Human Rights NGO Forum ayo akaramba kuenda kuparamende achiti nhengo dzawo dzainge dzisina kuchengetedzeka kuparamende.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Va Abel Chikomo, vati vasvitsa nhuna dzavo kuna Amai Pillay.
Apo Amai Pillay vari kushanya munyika, VaChikomo vati mapurisa asvika kumahofisi kwavo achivatsvanga asi vanga vasiko.
Amai Pillay vachange vari munyika kusvika neChishanu vachiongorora mamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu zvichitevera kukokwa kwavakaitwa nehurumende.